Sherufu Yakagadzirira Packaging
Imwe Luxury Bhokisi
Harry Potter / Disney Classics / Shamwari FSDU Kuzadzika
Walmart PDQ Ratidza Rack Kurumidza Kugadzirisa
Raymin Display inopa matatu akajairika "Carton kuratidza kurongedza uye nzira dzekutumira"
Nezve nzira yekutumira yekuratidzwa kwekatoni, vatengi vazhinji vane dambudziko rekuita pfungwa dzavo pakusarudza nzira dzekutumira.Nhasi tinoda kupa pfupiso yekuti tingasarudza sei yakanakisa nzira yekutumira pane zvinodiwa nemutengi.01 Flat-pack shipping Flat yakarongedzwa kutumira zvinoreva kuti ...
Nei Pallet Skirts Achinyanya Kushandiswa muCostco?
Pallet Skirts ane musoro ekushambadzira maturusi nekudhinda ruzivo rwechigadzirwa Kunyangwe e-commerce bhizinesi rakura mune zvimwe zvigadzirwa, zvitoro zvemakirabhu zvakaita seCostco neSam's Club zvanga zvichirova maitiro ekudzikira akatarisana nevamwe vatengesi.Ratidza maturusi akadai sepallet masiketi h...
Sei Chishongo Chekuchengetedza Bhokisi Chichigamuchirwa Neushamwari?
Vanhu vanogara vaine moyo werudo runako.Kunyanya hunhu hwemukadzi.Mukadzi achagara aine zvidimbu zvishoma zvaanofarira zvezvishongo muhupenyu hwake.Dambudziko nderokuti kana pane zvishongo zvakawandisa, zvichava nyore kuva bhora, uye zvakare zviri nyore kwazvo kurasikirwa nezvinhu zviduku;zvino ndoita sei...
Nei Kadhibhodhi Kuratidzwa Kuchawedzera Uye Kunyanya Kuzivikanwa Munyika?
na admin pa21-12-28
Kwandiri, anga ari muindasitiri yemapepa anoratidza rack kwemakore gumi, ndine nzwisiso yakadzama yehukuru hwebepa FSDU zvichienzaniswa nemamwe marudzi echinyakare epurasitiki/simbi/acrylic kuratidza racks.Munguva yanhasi yekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye nekukurumidza chigadzirwa kugadzirisa iteration kutenderera ...
Ndeupi Rudzi rweChigadzirwa Chinogona Kushandisa Pallet Display yekusimudzira paShopping Mall?
Kazhinji kutaura, Pepa Pallet Display inoreva kuratidzwa kwechigadzirwa kunogadzirwa nezvitoro zvesupermarket, dzimwe nguva chigadzirwa chemhando chimwe chinoratidzwa, dzimwe nguva musanganiswa wekuunganidzwa kwemhando dzinoverengeka.Inogona kuiswa pane pallet, kana bhokisi-mhando zvigadzirwa zvinogona kurongedzerwa zvakananga pagroun...
Sei POS Inoratidza Inonyanya Kupisa Kutengesa Krisimusi uye Horidhe Idzva isati yasvika?
POS inoratidzira inobuda seyakanyanya kukosha kwehupfumi, uye ine mhedzisiro yekukwezva vatengi uye kusimudzira zvigadzirwa zvechero nzvimbo yebhizinesi.Panguva imwecheteyo, ine zvakare mhedzisiro yekuvandudza chigadzirwa chifananidzo uye mukurumbira wekambani kumabhizinesi.Kadhibhodhi kuratidzwa kuri kutengeswa zvakanyanya ne...
Maitiro ekugadzira Bhokisi rePackaging Yezvishongo?
Zvishongo zvave zvichifarirwa nesu kubva kare kusvika nhasi.Icho chinhu chikuru zvakare kupa kune vanoda uye shamwari dzakakukomberedza, asi kana pasina yakanakisa zvishongo bhokisi rekusimuka, zvinozonyanya kukurumidza.Bhokisi rakanaka rezvishongo harisi rekubvisa chete kunaka kwezvishongo, asiwo pro...
Iwo Mashanu Hunhu eCosmetic Packaging Bhokisi Kugadzira uye Dhizaini
Cosmetic kurongedza bhokisi dhizaini dhizaini ndiyo yakajairika mhando yekurongedza, chero chigadzirwa chinoda kuve neruvara, cosmetic ruvara bhokisi kurongedza kurongedza kunokosha.Mazuvano, pakupa zvipo, vanhu havangokoshese kunaka kwechipo chacho, asi zvakare vanotarisisa zvakanyanya kuti ...
Maitiro eKusarudza Yakanaka Pallet Display yeZvigadzirwa zvako?
Seyakanyanya kutarisisa makadhibhokisi makuru emusupamaketi, iyo pepa pallet kuratidza inowanzo shandiswa kusimudzira nekusimudzira mahombe ezvitoro, saka maitiro ayo, chimiro, chimiro uye saizi zvinofanirwa kunyatso gadzirwa.Iyo yakanaka bepa pallet FSDU kuratidza inogona kugadzira ve...
Sei uchishandisa Kadhibhodhi pane Plastic seJewelry Set Packaging Mabhokisi Interlayer?
Ndinotenda kuti shamwari dzakawanda dzinoda kugadzira zvishongo zvekuisa mabhokisi ekuputira vanoda kuziva kuti nei mabhokisi ezvishongo akabatanidzwa nepurasitiki interlayer ave akakurumbira munguva yakapfuura.Mushure memakore gumi, mamiriro acho akatanga kuchinja nekukurumidza, uye mafekitori mazhinji ekurongedza atanga kushandura kushandisa ca...
Maitiro ekutarisa Kadhibhodhi Kuratidza Hunhu?
Kushandiswa kweCardboard Display (mapepa ekuratidzira anomira) kwaive kwakatekeshera muEurope nekuUnited States pakutanga.Iwo akadhindwa zvakanakisa Cardboard Display (mapepa ekuratidzira anomira) atekeshera munyika dzekunze uye anoshandiswa zvakanyanya muchikafu, makemikari ezuva nezuva, midziyo yemumba, magetsi...
Sei Vazhinji Kaviri-kuvhura High-magumo Mabhokisi Shandisa Magnets sezvo Kuvhara?
na admin pa 21-11-23
Paunenge uchitaura nezve musoro wemabhokisi ekuvhura-kaviri, vagadziri vebhokisi rekurongedza vakakutaurirai muchidimbu zvisati zvaitika, kana zvichibvira kugadzira mabhokisi ekuvhura kaviri inzira iri nyore yekutonga simba revagadziri vebhokisi rechipo, kunyangwe vanogona kuzviita zvirinani...
Kero:6th floor, No. 6348, Bao'an Ave., Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, CN 518103